Kenya oo Al-shabaab ku eedeysay bur burinta Siimanka Isgaarsiinta W/Bari | Baydhabo Online
Kenya oo Al-shabaab ku eedeysay bur burinta Siimanka Isgaarsiinta W/Bari
Rag la tuhmayo in ay ka tirsan yihiin Xarakada Al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe weerar ku qaaday labo Siin Isgaarsiineed oo ku taalla Mandheera iyo Ceelwaaq,waxaana ay bur buriyeen labadiiba.
Taliyaha Booliska Kenya ee Waqooyi Bari Fredrick Shisia,ayaa sheegay in ilaalada mid ka mid ah Siimaanka Safaricom ee la bur buriyay laga awood badiyay oo loo adeegsaday Hubka culus kii ay heysteen,waxaana uu sheegay in ay ahaayeen shan Askari oo ka tirsanb Booliska Kenya kuwaas oo naftooda kala baxsaday goobta.
Waxaa uu Shisha sheegay in khasaaraha uu inta hadda yahay ka badnaan lahaa haddii Ciidanka kale ee Kenya aysan ka gaari lahayn goobta oo ay ku socotay Bur burin sida uu sheegay.
Waxaa Uu sheegay in Ciidanka Amaanka Kenya ay aad u joogaan degaanka islamarkaan aaysan dadka safrayaa dhib iyo cabsi ku qabin waddooyinka,taas beddelkeeda ayuu sheegay in Al-shabaab ay hadda weerarayaan xarumaha isgaarsiinta degaanka si ay u jaraan xiriirka shacabka iyo Ciidanka.
Bishii November 4 weerar ayuu sheegay in ay degaannadaas ka dhaceen,kanna uu yahay kii shanaad,taas oo uu ku sheegay in ay tahay xeelladda Al-shabaab ee Gobolka Waqooyi bari.
Waxaa uu beeniyay in uu xiriir ka dhaxeeyo weerar Habeen hore ay Al-shabaab ku qabsadeen Ceelwaaq Soomaaliya iyo weerarkii shalay galab ka dhacay Mandheere iyo ceelwaaq Kenya,waxaana uu weerarka dambe ku tilmaamay in uu ahaa weerar argagiso oo iska caadi ah sida uu yiri.
Weerarkii shalay kadib ayuu sheegay in Ciidanka Kenya ay hub badan ka qabsadeen raggii weeraray xarumaha isgaarsiinta,islamarkaana ay Ciidanka Kenya qabsadeen hub badan iyada oo raggii goobta weerarayna ay u baxsadeen dhinaca Keymaha.